बुवालाई चितामा चढाएपछि अंश विवाद भएर घाटमै दाजुभाइबीच कुटाकुट (भिडियो सहित) – Janamukhi.com
बुवालाई चितामा चढाएपछि अंश विवाद भएर घाटमै दाजुभाइबीच कुटाकुट (भिडियो सहित)
जनमुखी संबाददाता २० बैशाख २०७६, शुक्रबार
बैशाख २०, भनिन्छ नि, मानिसको जन्म÷मृत्यु एक पटक मात्रै हुन्छ । हरेक मानिसको जन्ममा सबैले खुसिको उत्सव मनाउँछन् भने मृत्युमा शोक । मानिसको मृत्यु भएपछि उसको परीवार, आफन्त तथा गाउँ शोकमग्न हुने गर्छ । तर, झापाको कमल गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा भने बुवालाई चितामा चढाएपछि अंश विवादमा घाटमै दाजुभाइबीच कुटाकुट भएको छ ।
मंगलबार बिहान ८५ बर्षिय मृतक रघुनन्द गौतमको दाहसंस्कार स्थलमै अंश विवादले कुटाकुटको गरेका हुन् । मंगलबार बिहान ८५ वर्षको उमेरमा रघुनन्द गौतमको मृत्यु भयो । गौतम काइँला छोरासँग दमकमा बस्ने गर्थे । करिब एक वर्षअघि बिरामीले थलिएका गौतम साइँला छोरा नरेन्द्र गौतमसँग कमल गाउँपालिकामा बस्दै आएका थिए । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका साइँला छोरा(नरेन्द्र) ले बुवाको जिउनी अंश बेचेर उपचार गर्ने योजना बनाए ।
तर बुवाको जिउनी भाइले आफ्नो नाममा पारेको पाइएपछि बुवाको उपचारमा समस्या भयो । ‘बुवाको जिउनी पुनः फिर्ता गर्न भन्दा भाइले अटेर गर्यो, बाबुलाई उपचार गर्दा मलाई ऋण लागेको छ भनेर भाइ पन्छिन खोज्यो’, नरेन्द्रले भने, ‘समाज राख्नेदेखि गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी दिँदा भाइले जिउनी फिर्ता गरेनन् ।’ यो प्रकरणमा गल्ती काइँला छोराको भएको स्थानीय प्रकाश बाँस्कोटाको भनाइ छ । उनले बुवा विरामी हुँदासमेत उपचारमा बेवास्ता गरेको सापकोटाले बताएका छन् ।
बिहान ९स्५४ बजे रघुनन्दको निधन भयो । निधनको चार घण्टापछि स्थानीय किस्नेघाटमा अन्तिम संस्कारको लागि लगियो। घाटमै दमक बस्दै आएका काइँला भाइ कुलेन्द्र र उनका साथीहरुले अपशब्द प्रयोग गरेर भतिजलाई हात हालेपछि विवादले उग्ररुप लिएको थियो। विवादका क्रममा कुलेन्द्र र श्रीमतीले जेठानी दिदीमाथि दुर्व्यवहार र अपपशब्द प्रयोग गरेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् ।
‘भाउजुलाई अपशब्द प्रयोग गरेपछि नरेन्द्रले भाइलाई हात हालेका हुन्, आर्यघाटमा युवाहरुको समूह बनाएर आएका रहेछन्’ स्थानीय तुलसीराम दंगालले भने । उनले आजसम्म यस्तो घटना नदेखेको बताए । ‘सम्पत्तिको लोभले बुवाको अन्तिम बिदाइ गरिरहँदा घाटमै दाजुभाइबीच कुटाकुट भयो। कुलेन्द्र त शिक्षक हुन्, उनले विद्यार्थीलाई कस्तो शिक्षा र संस्कार दिन्छन् ? हाम्रो समाज कहाँ जाँदैछ ?’, उनले प्रश्न गरे। उता आरोप लागेकाभाइ कुलेन्द्रले भने सिंगो समाज नै आफूविरुद्ध लागेर गलत सावित गर्न खोजेको बताए । ‘सिङ्गो समाज नै मविरुद्ध लागेको छ। मैले यो समाजको के बिगारिदिएको छु ?’ उनले प्रश्न गरे ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, अलिकति त लोकलाज राख्नुस्:कांग्रेस प्रवक्ता
साथीसँग कुरा गरेको आरोपमा शिक्षकले विद्यार्थीलाइ निलडाम हुने गरी कुटे
प्रधानमन्त्री ओली निकटका विद्यार्थीहरु दिनभरि सडकमा, रातभरी भट्टीभोजमा(भिडियो सहित)
सौराहामा गैडा माथि दुर्ब्यबहार:गैडा माथि बस्न खोज्नेलाई कारबाही होला ?(भिडियो सहित)
माडीको डुंगा दुर्घटना:प्रहरी जवान उद्दार नगरी हेरेरै बसे (भिडियो सहित)